ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေမည့်နည်းလမ်းများ – Gentleman Magazine
ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေမည့်နည်းလမ်းများ
သင် ဟာ အိပ် ရေးဝမှ ကျန်းမာမယ် ဆိုတာကို သိရက် နဲ့ ဘာလို့ ဖုန်းကိုပိတ် ပြီး သွားမအိပ် နိုင် တာလဲ?? ကျွန် တော် တို့အားလုံးဟာ ဘာလုပ် ရင် ကျန်းမာမယ် ဆိုတာ သိရက် နဲ့ သွားမလုပ် နိုင် ကြဘူး။ ကျန်းမာ ရေးနဲ့ မညီညွတ် တာ တွေကိုပဲ စားချင် နေတယ် ။ အဲဒါ ကြောင့်သင့် ရဲ့ အားနည်းချက် တွေကို ပြင် ဖို့ အောက် ကဟာ တွေကို ဖတ် ကြည့် လိုက် ပါ။
၁. အိပ် ရာနိုးရင် ထဖို့
Snooze တစ် ခါ လောက် နှိပ် တာ ဘာမှမဖြစ် ပါဘူး။ ဒါ ပေမယ့်၅ ခွဲ Alarm ပေးထားပြီး ဆယ် မိနစ် တစ် ခါ Snooze လုပ် ရင်း၇ နာရီ ထိုးသွားတာက တော့ အချိန် ဖြုန်းတာပါ။ အဲဒိအကျင့်ဖျောက် ဖို့ သင့် ရဲ့ နာရီကို ပြတင်းပေါက် ဘေး၊ မီးခလုတ် နားမှာထားပါ။ Alarm သွားပိတ် ရင်းအလင်းရောင် ဝင် လာ အောင် လုပ် လိုက် ပါ။ အဲဒါ ပိုပြီးနိုးထရ လွယ် ကူ စေပါတယ်။
၂. နေ့တိုင်းသွားပွတ် ကြိုးသုံးဖို့
တချို့ သွားဆရာဝန် တွေ တောင် အဲဒိအကျင့်မရှိတတ် ပါဘူး။ အဲဒိအကျင့် ရဖို့ သွားပွတ် ကြိုးသုံးပြီးတိုင်းအဲဒိ သုံးပြီးသားကြိုးကို ပြန် နမ်းကြည့် ပါ။ အဲဒါဟာ သင့် ရဲ့ ခံတွင်းနံ့ပါပဲ။ သင့် ရဲ့ သွားဖုံးက သွေးထွက် ရင် မစိုးရိမ် ပါနဲ့။ အဲဒါက သွားပွတ် ကြိုးစသုံးတဲ့သူ တွေ ဖြစ် တတ် ပါတယ် ။ နှစ် ပါတ် လောက် ကြာတာ တောင် သွေးဆက် ထွက် နေရင် တော့ ရေစီးကမ်းပြို ဖြစ် နေတတ် ပါတယ် ။ ဆရာဝန် ပြပါ။
၃. မနက် စာ ကောင်းကောင်းစားဖို့
မနက် စာ ကောင်းကောင်းစားတဲ့ အကျင့် ရဖို့ မိနစ် ၂၀ ပို စောထပါ။ ပြီး တော့ ဝက် အူ ချောင်းကြက် ဥ ကြော် တစ် ပွဲအပြင် ငှက် ပျော် သီး တစ် လုံး ကိုကိုးတစ် ခွက် ပဲ စေ့ လက် တစ် ဆုပ် လောက် စားလိုက် ပါ။
၄. အလုပ် စလုပ် ဖို့
ကွန် ပျူတာ ရှေ့ ရောက် တာနဲ့ သင် လုပ် ရမယ့်အလုပ် ကို မလုပ် ချင် ပဲ တခြားဟာ တွေပဲ လျှောက် လုပ် မိ နေပါသလား?? အဲဒါဆိုရင် ၁၅ မိနစ် လောက် အချိန် ပေးပြီး ဒီ နေ့ လုပ် ရမယ့်အလုပ် တွေကို အကြမ်းဖျင်းအချိန် ဇယားဆွဲလိုက် ပါ။ မှား နေတာ တွေကို ပြီးမှ ပြင် ပါမယ် ။ တစ် ခုခု စလုပ် မိသွားဖို့က အ ရေးကြီးပါတယ် ။ အရှိန် ရသွားရင် တခြားဟာ တွေက လွယ် သွားပါလိမ့် မယ် ။
၅. ရေဓာတ် ပြည့် ဝ နေဖို့
အလုပ် ရှုပ် နေရင် ရေ သောက် ဖို့ မေ့ နေတတ် ပါတယ် ။ သင် ရေဓာတ် ခမ်းခြောက် လာရင် စိတ် ညစ် လာတတ် ပါတယ်။ သင့် စားပွဲမှာ စပ် တဲ့ ရေညှိလိုစားစရာ တစ် ခုခု တင် ထားလိုက် ရင် ရေ သောက် ဖို့ မ မေ့ လောက် တော့ပါဘူး။
၆. အသီးအရွက် စား ဖို့
အသီးအရွက် ၇ ပွဲ လောက် စား ပေးခြင်းဟာ သေနှုန်းကို ၄၂ ရာနှုန်းလောက် လျော့ကျ စေပါတယ် ။ အများကြီးလို့ ထင် နေပါသလား? မနက် စာကို သစ် သီး ဖျော် ရည် တစ် ခွက် ထည့် လိုက် ပါ။ နေ့လည် စာချက် ရင် ပန်းဂေါ်ဖီတို့ ဘာတို့ ထည့် လိုက် ပါ။ မုန့် ဟင်းခါးဆို ဂေါ်ဖီ လေးထည့် လိုက် ပါ။ ဟင်းချိုဆို မုန် ညင်းထည့် လိုက် ပါ။
၇. လေ့ကျင့် ခန်းမလုပ် ချင် တဲ့ နေ တွေ လုပ် မိဖို့
မလှုပ် မရှားချင် တဲ့ နေ့ တွေမှာ သင် အကြိုက် ဆုံး လေ့ကျင့် ခန်းတစ် ခု လောက် စလုပ် လိုက် ပြီး ချွေးထွက် လာရင် အဆင် ပြေသွားပါပြီ။ Gym မသွားချင် ရင် အိမ် မှာပဲ လုပ် ပါ။ ဒါ ဆို လေ့ကျင့် ခန်းမလုပ် ဖြစ် တဲ့ရက် မရှိ လောက် တော့ပါဘူး။
၈. တီဗွီဖြတ် ဖို့
တီဗွီမှာပဲ ထိုင် နေပြီးကြည့် ပြီးသားကား တွေ ပြန် ကြည့် ရင်းအချိန် ကုန် နေပါသလား။ ကြော် ငြာဝင် လာရင် ရီမုတ် ထဲက ဓာတ် ခဲ တွေ ဖြုတ် ထားလိုက် ပါ။ သင့် ဇနီးရှိရင် သူ့ကို အဲဒါ တွေ ဖွက် ထားဖို့ အကူအညီ တောင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရီမုတ် ကို တီဗွီမရှိတဲ့ တခြားအခန်းစင် ခပ် မြင့် မြင့်တစ် ခု ပေါ် တင် ထားလိုက် ပါ။
၉. တရားမထိုင် ချင် ရင်
တရားထိုင် ခြင်းဟာ စိတ် ဖိစီးမှု ကို အများကြီးလျော့ကျ စေပါတယ် ။ ဒါ ပေမယ့်လူ တော် တော် များများက မလုပ် ချင် ပါဘူး။ အဲဒါဆို တိတ် ဆိတ် တဲ့ နေရာတစ် ခုမှာ ထိုင် ပြီး သင့် ပျော် ခဲ့တဲ့ အချိန် တွေအ ကြောင်း၅ မိနစ် လောက် ပြန် တွေးကြည့် လိုက် ပါ။ အဲဒါက အကျိုးတူတူပါပဲ။
၁၀. အိပ် ရာ စော စော ဝင် နိုင် ဖို့
အလုပ် အားလုံးလုပ် ပြီးရင် အိပ် ရာကို မသွားချင် ကြ သေးပါဘူး။ ညအိပ် ရာ စော စောသွားဖို့ အရမ်းခက် ပါတယ် ဆိုတာ သိမှာပါ။ အဲဒိအတွက် အိပ် ချိန် သတ် မှတ် ထားပါ။ အဲဒိအိ ပ် ချိန် မ ရောက် ခင် မိနစ် ၃၀ လောက် မှာ Alarm ပေးပြီး Screen တွေကို ပိတ် ၊ မီး တွေကို မှိန် လိုက် ပါ။ အိပ် ရာထဲ ရောက် တာနဲ့လဲ တန်းအိပ် ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သင့် ကိုယ် သင် ပျင်းစရာ ကောင်းတာ တစ် ခုခု လုပ် နေတယ် တွေး နေပါ။ ကျွန် တော် ဆို ရေနက် ထဲကို ငုပ် သထက် ငုပ် သွားတယ် လို့ တွေးပါတယ် ။ အဲလိုဆို ပိုပြီး အိပ် ပျော် တာ မြန် ပါတယ် ။
ကနျြးမာ စမေညျ့နညျးလမျးမြား
သငျ ဟာ အိပျ ရေးဝမှ ကနျြးမာမယျ ဆိုတာကို သိရကျ နဲ့ ဘာလို့ ဖုနျးကိုပိတျ ပွီး သှားမအိပျ နိုငျ တာလဲ?? ကြှနျ တျော တို့အားလုံးဟာ ဘာလုပျ ရငျ ကနျြးမာမယျ ဆိုတာ သိရကျ နဲ့ သှားမလုပျ နိုငျ ကွဘူး။ ကနျြးမာ ရေးနဲ့ မညီညှတျ တာ တှကေိုပဲ စားခငျြ နတေယျ ။ အဲဒါ ကွောငျ့သငျ့ ရဲ့ အားနညျးခကျြ တှကေို ပွငျ ဖို့ အောကျ ကဟာ တှကေို ဖတျ ကွညျ့ လိုကျ ပါ။
၁. အိပျ ရာနိုးရငျ ထဖို့
Snooze တဈ ခါ လောကျ နှိပျ တာ ဘာမှမဖွဈ ပါဘူး။ ဒါ ပမေယျ့၅ ခှဲ Alarm ပေးထားပွီး ဆယျ မိနဈ တဈ ခါ Snooze လုပျ ရငျးရ နာရီ ထိုးသှားတာက တော့ အခြိနျ ဖွုနျးတာပါ။ အဲဒိအကငျြ့ဖြောကျ ဖို့ သငျ့ ရဲ့ နာရီကို ပွတငျးပေါကျ ဘေး၊ မီးခလုတျ နားမှာထားပါ။ Alarm သှားပိတျ ရငျးအလငျးရောငျ ဝငျ လာ အောငျ လုပျ လိုကျ ပါ။ အဲဒါ ပိုပွီးနိုးထရ လှယျ ကူ စပေါတယျ။
၂. နတေို့ငျးသှားပှတျ ကွိုးသုံးဖို့
တခြို့ သှားဆရာဝနျ တှေ တောငျ အဲဒိအကငျြ့မရှိတတျ ပါဘူး။ အဲဒိအကငျြ့ ရဖို့ သှားပှတျ ကွိုးသုံးပွီးတိုငျးအဲဒိ သုံးပွီးသားကွိုးကို ပွနျ နမျးကွညျ့ ပါ။ အဲဒါဟာ သငျ့ ရဲ့ ခံတှငျးနံ့ပါပဲ။ သငျ့ ရဲ့ သှားဖုံးက သှေးထှကျ ရငျ မစိုးရိမျ ပါနဲ့။ အဲဒါက သှားပှတျ ကွိုးစသုံးတဲ့သူ တှေ ဖွဈ တတျ ပါတယျ ။ နှဈ ပါတျ လောကျ ကွာတာ တောငျ သှေးဆကျ ထှကျ နရေငျ တော့ ရစေီးကမျးပွို ဖွဈ နတေတျ ပါတယျ ။ ဆရာဝနျ ပွပါ။
၃. မနကျ စာ ကောငျးကောငျးစားဖို့
မနကျ စာ ကောငျးကောငျးစားတဲ့ အကငျြ့ ရဖို့ မိနဈ ၂၀ ပို စောထပါ။ ပွီး တော့ ဝကျ အူ ခြောငျးကွကျ ဥ ကွျော တဈ ပှဲအပွငျ ငှကျ ပြျော သီး တဈ လုံး ကိုကိုးတဈ ခှကျ ပဲ စေ့ လကျ တဈ ဆုပျ လောကျ စားလိုကျ ပါ။
၄. အလုပျ စလုပျ ဖို့
ကှနျ ပြူတာ ရှေ့ ရောကျ တာနဲ့ သငျ လုပျ ရမယျ့အလုပျ ကို မလုပျ ခငျြ ပဲ တခွားဟာ တှပေဲ လြှောကျ လုပျ မိ နပေါသလား?? အဲဒါဆိုရငျ ၁၅ မိနဈ လောကျ အခြိနျ ပေးပွီး ဒီ နေ့ လုပျ ရမယျ့အလုပျ တှကေို အကွမျးဖငျြးအခြိနျ ဇယားဆှဲလိုကျ ပါ။ မှား နတော တှကေို ပွီးမှ ပွငျ ပါမယျ ။ တဈ ခုခု စလုပျ မိသှားဖို့က အ ရေးကွီးပါတယျ ။ အရှိနျ ရသှားရငျ တခွားဟာ တှကေ လှယျ သှားပါလိမျ့ မယျ ။
၅. ရဓောတျ ပွညျ့ ဝ နဖေို့
အလုပျ ရှုပျ နရေငျ ရေ သောကျ ဖို့ မေ့ နတေတျ ပါတယျ ။ သငျ ရဓောတျ ခမျးခွောကျ လာရငျ စိတျ ညဈ လာတတျ ပါတယျ။ သငျ့ စားပှဲမှာ စပျ တဲ့ ရညှေိလိုစားစရာ တဈ ခုခု တငျ ထားလိုကျ ရငျ ရေ သောကျ ဖို့ မ မေ့ လောကျ တော့ပါဘူး။
၆. အသီးအရှကျ စား ဖို့
အသီးအရှကျ ရ ပှဲ လောကျ စား ပေးခွငျးဟာ သနှေုနျးကို ၄၂ ရာနှုနျးလောကျ လြော့ကြ စပေါတယျ ။ အမြားကွီးလို့ ထငျ နပေါသလား? မနကျ စာကို သဈ သီး ဖြျော ရညျ တဈ ခှကျ ထညျ့ လိုကျ ပါ။ နလေ့ညျ စာခကျြ ရငျ ပနျးဂျေါဖီတို့ ဘာတို့ ထညျ့ လိုကျ ပါ။ မုနျ့ ဟငျးခါးဆို ဂျေါဖီ လေးထညျ့ လိုကျ ပါ။ ဟငျးခြိုဆို မုနျ ညငျးထညျ့ လိုကျ ပါ။
၇. လကေ့ငျြ့ ခနျးမလုပျ ခငျြ တဲ့ နေ တှေ လုပျ မိဖို့
မလှုပျ မရှားခငျြ တဲ့ နေ့ တှမှော သငျ အကွိုကျ ဆုံး လကေ့ငျြ့ ခနျးတဈ ခု လောကျ စလုပျ လိုကျ ပွီး ခြှေးထှကျ လာရငျ အဆငျ ပွသှေားပါပွီ။ Gym မသှားခငျြ ရငျ အိမျ မှာပဲ လုပျ ပါ။ ဒါ ဆို လကေ့ငျြ့ ခနျးမလုပျ ဖွဈ တဲ့ရကျ မရှိ လောကျ တော့ပါဘူး။
၈. တီဗှီဖွတျ ဖို့
တီဗှီမှာပဲ ထိုငျ နပွေီးကွညျ့ ပွီးသားကား တှေ ပွနျ ကွညျ့ ရငျးအခြိနျ ကုနျ နပေါသလား။ ကွျော ငွာဝငျ လာရငျ ရီမုတျ ထဲက ဓာတျ ခဲ တှေ ဖွုတျ ထားလိုကျ ပါ။ သငျ့ ဇနီးရှိရငျ သူ့ကို အဲဒါ တှေ ဖှကျ ထားဖို့ အကူအညီ တောငျးပါ။ ဒါမှမဟုတျ ရီမုတျ ကို တီဗှီမရှိတဲ့ တခွားအခနျးစငျ ခပျ မွငျ့ မွငျ့တဈ ခု ပျေါ တငျ ထားလိုကျ ပါ။
၉. တရားမထိုငျ ခငျြ ရငျ
တရားထိုငျ ခွငျးဟာ စိတျ ဖိစီးမှု ကို အမြားကွီးလြော့ကြ စပေါတယျ ။ ဒါ ပမေယျ့လူ တျော တျော မြားမြားက မလုပျ ခငျြ ပါဘူး။ အဲဒါဆို တိတျ ဆိတျ တဲ့ နရောတဈ ခုမှာ ထိုငျ ပွီး သငျ့ ပြျော ခဲ့တဲ့ အခြိနျ တှအေ ကွောငျး၅ မိနဈ လောကျ ပွနျ တှေးကွညျ့ လိုကျ ပါ။ အဲဒါက အကြိုးတူတူပါပဲ။
၁၀. အိပျ ရာ စော စော ဝငျ နိုငျ ဖို့
အလုပျ အားလုံးလုပျ ပွီးရငျ အိပျ ရာကို မသှားခငျြ ကွ သေးပါဘူး။ ညအိပျ ရာ စော စောသှားဖို့ အရမျးခကျ ပါတယျ ဆိုတာ သိမှာပါ။ အဲဒိအတှကျ အိပျ ခြိနျ သတျ မှတျ ထားပါ။ အဲဒိအိ ပျ ခြိနျ မ ရောကျ ခငျ မိနဈ ၃၀ လောကျ မှာ Alarm ပေးပွီး Screen တှကေို ပိတျ ၊ မီး တှကေို မှိနျ လိုကျ ပါ။ အိပျ ရာထဲ ရောကျ တာနဲ့လဲ တနျးအိပျ ဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ သငျ့ ကိုယျ သငျ ပငျြးစရာ ကောငျးတာ တဈ ခုခု လုပျ နတေယျ တှေး နပေါ။ ကြှနျ တျော ဆို ရနေကျ ထဲကို ငုပျ သထကျ ငုပျ သှားတယျ လို့ တှေးပါတယျ ။ အဲလိုဆို ပိုပွီး အိပျ ပြျော တာ မွနျ ပါတယျ ။
Previous: ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေမည့် နိမိတ်လက္ခဏာများ
Next: အဆီတိုးစေနိုင်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသောက်ဖွယ်ရာများ